Sway Lithium – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
स्वाई लिथियम एक ई.एस. स्कूटर निर्माता गोवससँग साझेदारीमा क्यालिफोर्नियामा ई.आई. स्टार्ट अप अप सय मोटोर्सपोर्टबाट इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। Govecs दुनिया मा सबै भन्दा ठूलो इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताहरु मध्ये एक हो र एक उच्च गुणवत्ता OEM उत्पादन को रूप मा स्कूटर को उत्पादन गर्दछ।
स्कूटरमा6किलोवाट इ-व्हील विद्युत् मोटर छ। प्रतिबन्ध बिना स्कूटरको माथिल्लो गति 88.5 कि.मी. / घन्टा छ।
स्कूटरमा 4.2 केडीई लिथियम ब्याट्री छ जसले 65 किलोमिटरको प्रभावकारी ड्राइभिङ्ग दायरा प्रदान गर्दछ। Govecs लाई ब्याट्रीको दायराको ग्यारेन्टी दिन्छ। तिनीहरूको ब्याट्री निरन्तर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ जब सम्म ब्याट्री खाली छैन।
स्वाय 2012 मा एक सानो मोटरसाइकिल स्कूटर नवाचार को रूप मा पेश गरियो र 2015 मा लोकप्रिय टी वी शो शार्क टैंक मा प्रस्तुत भएको थियो जसमा यसलाई पूर्व-अर्डर मा $ 1 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त भयो।
कसैको लागि ड्राइभ गर्न सजिलो
अभिनव तीन पहिएदार ड्राइभिङ प्रणालीको फाइदा भनेको यो सजिलो र सुरक्षित हो जुन सबैको लागि महिला, पुरुष वा ड्राइभमा। टिभी शो शार्क टैंकको समयमा स्कूटरको संस्थापक जो विल्कोक्सको आमा-जो 5'2 छ र परीक्षणमा परी 60 जना थिए।
झुकाव-ड्राइभ नवाचारले अनौठो ड्राइभिंग अनुभव प्रदान गर्दछ र कोन्सरहरूमा स्थिरता बढाउँछ। स्वे स्कूटरमा सवारमा सवारी साधनको प्रत्यक्ष ट्राफिक छ, पेट्रोल लिङ्क डिजाइन मार्फत। यसले एक मोटरसाइकल घुमाईन वा कुनै अन्य तीन-पहिए स्कूटर घुमाउने सफ्टवेयरलाई पूर्ण अनुभव गर्दछ।
स्कूटर धेरै रंगहरूमा उपलब्ध छ र Shopify मा अनलाइन आदेश गर्न सकिन्छ। स्कूटर विश्वव्यापी पठाइएको छ र गव्वेन्स द्वारा सेवा र वारंटीको प्रदान गरिएको छ।
2021 Sway Motorsports मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै Sway Motorsports स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: